top 5 Cities Iyadoo cawayska habeenkii The Best In Europe | Save A tareenka
Home > safarka Europe > top 5 Cities Iyadoo cawayska habeenkii The Best In Europe
safrida si aad u aragto indhaha waa doorasho weyn - laakiin waxa haddii aad kaliya doonayaan in ay leeyihiin xiiso leh? Haddii ay sidaa tahay, waxaa jira magaalo iyo cawayska ugu fiican, iyo helitaanka waxaa tareen waa wax fudud oo aan qaali ahayn.
Waayo, xayawaanka xisbiga, waxaa jira waxba arrin sida kulma cawayska magaalada cusub. Waxa ugu fiican ee ku saabsan waxa ay qabanayaan in Europe waa in magaalo kasta oo uu leeyahay vibe a kala duwan. Eeg hogaanka 5 magaalo iyo cawayska ugu fiican oo loo arko mid ka mid ah ugu aad ku raaxaysato:
1. Berlin ee cawayska habeenkii, Germany
Waxaad ka heli doontaa Berlin xagga sare 5 Magaalo iyo cawayska ugu fiican ee sabab. Magaaladu waxay leedahay goobta a Trine firfircoon oo aad u daran waa laga qabanin, ee Europe. Berlin waxay soo jiidataa dad badan oo isku fikir ah xafladda xoolaha. Taasi waa sababta ay ku dhowaad damaanad ah in ay waqti fiican in mid ka mid ah kooxaha ay badan. Berghain waa hubaal hudheellada caanka ee magaalada ugu caansan, iyo waliba midka ugu khaaska ah iyo qaar, yidhaa kan ugu fiican yurub. Marka warshad koronto ah, Haddaba waxaa la gaaray xuddunta u ah goobta Trine Berlin ee. Waxaad aan ka maqnaan waxa booqanaya kartaa haddii aad raadineyso weeyna waqti fiican! Nasiib wanaag, gaarey Berlin tareen waa u fududahay - aad ka heli kartaa Amsterdam, London, iyo Frankfurt, ka mid ah magaalooyinka kale.
2. Amsterdam ee cawayska habeenkii, ah Netherlands
Amsterdam waa mid ka mid ah magaalooyinka in ay mudan yihiin in ay sumcad sida mid ka mid ah ugu wanaagsan ee ay xafladayso. Waa caan ah caga, gaar ahaan kuwo riyooday, technofest, hip hop, guriga qoto dheer, iyo EDM. Qaar ka mid ah kuwa ugu muhiimsan meelaha ay soo booqdaan waa Warehouse Elementenstraat iyo Sugar Factory. Labaduba waa kooxo waa weyn ay xafladayso at, ku xiran tahay waxa aad jeceshahay. Hal sheey aan hubo - dhinacyadu yihiin duurjoogta ah. Labada kooxood ayaa ha la xidho ilaa 3 ama 4 a.m., sidaa darteed waxaa jirta waqti badan inay ku raaxaystaan. Gaaraan Amsterdam tareen ka mid waaweyn magaalooyinka Yurub sida Berlin, Paris, London, iyo Brussels.
In Scandinavia qabow, labada maxalliga ah iyo dalxiisayaasha ogaato sida ay xafladayso. Stockholm ka mid ah magaalooyinka la cawayska ugu wanaagsan ee loo aaneynayo kala duwan ee kooxaha iyo dad badan oo iyaga oo ku. Jahannamo ee Jikada waa meel aadan ka maqnaan karin ee Stockholm, si aad u hubiso in aad iska baarto. magaaladan waxaa si fudud gaaray by tareen ka kale xarumaha tareenka Yurub.
jawi taariiq gaar Rome ee wanaajisaa tayada Trine magaalada. Quintessentially Talyaani, waayo-aragnimo ee Trine in Rome ayaa ah qaar ka mid nolosha jecel, soo jiidashada joogtada ahayn in ay. dabaqyada qoob ka Big, bartenders saaxiibtinimo, iyo jawi xiiso dhigi Rome ee cawayska waayo-aragnimo u gaar ah. Mid ka mid ah qaybaha ugu wanaagsan ku saabsan booqashada Talyaaniga Waa in ay jiraan badan oo raacid tareenka. Waxay heli kartaa in aad meel kasta oo aad rabto si ay u tagaan. Qaar iyaga ka mid ah ayaa kugula dhaqmi doona indhaha quruxda badan ee jidka.
London ayaa goobta ka duwan Trine in geliya ka mid ah shan magaalo top la cawayska ugu fiican Yurub. Waxaad booqan kartaa goobaha cawayska soo jiidasho leh, shows burlesque, kooxaha Retro, iyo wax u dhexeeya. Waa meel fiican oo xisbiga, iyo helitaanka London by tareenka waa la heli karo magaalooyinka waaweyn ee Yurub ugu. Ha ka maqnaan London aragnimada Trine!
Diyaar ma u tahay in aad safar ku xiga xisbiga-doonaya? our Top 5 Magaalo iyo cawayska habeenkii Best in Europe aadan niyad jabin doonaa, xataa haddii aad ka hor inta iyaga booqday. Jartaan tikidhka tareenka aad oo wuxuu ku raaxaysan ka xiiso leh iyo music!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this, ama riix halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftop-cities-best-nightlife%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#naadi London cawayska xisbiga talooyin tareenka travelamsterdam travelengland travelgermany travelnetherlands